Addedlọ ọrụ agbakwunyere ọnụahịa Emepụtara na Ngwaahịa | N'oge
Ọrụ ndị agbakwunyere bara uru Jiri ọrụ bara uru bara uru iji wuo akara aka gị! Nkwalite ụdị 1. Biko tinye ntinye ahịa ma debe ndị ahịa gị. 2. Repackage ngwaahịa na ahaziri packagin ...
Jiri anyị uru-kwukwara ọrụ iwu gị onwe ika!
1. Biko tinye ntinye ahịa ma debe ndị ahịa gị.
2. Repackage ngwaahịa na ahaziri nkwakọ igbe na ọkacha mmasị gị ịke.
3. Nwụnye na nzukọ nwere ike mma gị na ọkọnọ yinye na mfe nkesa usoro.
4. labeling bụ a na-eweta nsogbu ma dị mkpa usoro, otú ahụ ka anyị ga-eweghara ya n'ihi na ị na ebe kpọọ ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji hụ na gị na ngwaahịa ndị anya.
Tụkwasịnụ Chain Service
Na ahịa a na-agbanwe ngwa ngwa, usoro ndụ ngwaahịa na-adị mkpụmkpụ ma dị mkpụmkpụ, ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche, oge ịre ahịa dị ezigbo mkpa, nke ga-ekpebi ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahụ.
GZ Ontime Tụkwasịnụ Chain Services (SCS) na-enye end-na-ọgwụgwụ ọkọnọ yinye ọrụ maka OEM (Original Equipment Manufacturer), ODM (Original Design Manufacturer), EMS (Electronic Manufacturing Service Provider) na electronic akụrụngwa emepụta nke mere na ha nwere ike na-ebuli ya ọkọnọ yinye.
Dị ka a zuru ụwa ọnụ onye nkesa, anyị ọtụtụ akara kaadị na-enye ndị ahịa a "onye-nkwụsị" ahụmahụ maka imewe na ọkọnọ yinye chọrọ. The nka na ngwaọrụ na-eji anyị ọkọnọ yinye otu ekwe ka ị belata mkpokọta na-eri nke ihe onwunwe ị nweta, jirichaa gị na-arụ ọrụ ego, na-enwe mgbanwe nke ihe onwunwe nnweta jirichaa gị ahịa òkè na profitability.
Ịkwụ Ụgwọ na ị nweta gị n'ụlọnga ọrụ
Ọrụ ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ azụmahịa
Anyị nwere ike nye gị free factory ugwo ọrụ.
Ọrụ 1688.com/taobao.com/jd.com ụlọ ọrụ na-azụ ahịa
Anyị na-akpọtụrụ ndị na-ere ere ma kpaa nkata maka ahịa gị
Taobao na weebụsaịtị ndị ọzọ China anaghị anabata PayPal! Anyị na-ekwe ka ị na-eziga ugwo site na PayPal, na mgbe ahụ anyị ga-eji a Chinese ugwo na-eweta ụgwọ soplaya! Nye gị ukwuu nchedo mgbe ịzụrụ si a Chinese soplaya!
Iji anyị ọtụtụ afọ nke Taobao ịzụ ahịa ahụmahụ, anyị ga-enye gị ndụmọdụ na-ere ákwà irè na ndị ọzọ na Taobao Atụmatụ ...
Anyị nwere ike nye gị ngwaahịa zuo, gị n'ụlọnga, nnyocha, zuru ụwa ọnụ, ụgbọ njem, ma ọ bụrụ na ị chọrọ, anyị nwere ike inye gị ihe ọ bụla ọzọ ọrụ.
Nke gara aga: Dropshipping gị n'ụlọnga
Osote: Nzipu ozi